एक ट्राभलको लापरबाहीले पैसा र समयको बर्बादी संगै कोरिया हिडेका युवा दुवई एअरपोर्टमा अलपत्र::Jalpa Khabar
एक ट्राभलको लापरबाहीले पैसा र समयको बर्बादी संगै कोरिया हिडेका युवा दुवई एअरपोर्टमा अलपत्र
Published on: १८ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १४:३५
काठमाडौ : नेपालमा छुट्टी मनायर कोरिया फर्कदै गर्दा एक युवा ट्राभल एजेन्सीको लापरबाहीले बीच बाटैमा अलपत्र परेका छन्। काठमान्डौ यरपोर्टको गेट अपोजीट एक ट्राभल रहेको छ। जसको नाम हो गोल्डेन टच एण्ड टुर्स। ” टिकट काट्ने ट्राभल एजेन्सीले पहीला पैसा मागेको पहीलो रेकर्ड हो यो, युवा भन्छन् जानाजान मेरो पैसा खाने दाउ गरेको रैछ ट्राभल्सले। पहीला कुनै पनी कामदारलाई टिकटभन्दापनी उसको आवश्यक डकुमेन्ट हेर्न पर्छ।
” टिकट काट्ने ट्राभल एजेन्सीले पहीला पैसा मागेको पहीलो रेकर्ड हो यो, युवा भन्छन् जानाजान मेरो पैसा खाने दाउ गरेको रैछ ट्राभल्सले। पहीला कुनै पनी कामदारलाई टिकटभन्दापनी उसको आवश्यक डकुमेन्ट हेर्न पर्छ।कोरोनाको टेस्ट गर्ने हस्पीटल कोरियाको लागी कुन कुन हुन त्यो बुझ्नुपर्छ नी ट्राभलले। एक जना राम्जी अधीकारी जो गोल्डेन टच एण्ड टुर्सका मालीक उनैलाई थाह छैन कोरियाको लागी कोरोना टेष्ट कहां गराउनु पर्छ।टिकट काउन्टरमा रहेकी उहांकी छोरी रोजीना सापकोटा भन्नुहुन्छ मलाई थाह छैन डकुमेन्ट आंफै मिलाउनु। यस्तो लापरबाही कोरोनाको वेलामा कुनै ट्राभलले गर्ला? कुन हस्पीटलबाट कोरोना परिक्षण गर्नुपर्छ भनेर सोध्दा रोजीना सापकोटा जस्लाई केही थाह छैन रेछ उहांले kdc, star hospital र hams जुनमा गरेनी हुन्छ भन्नुभो पिडित भन्छन्।
तर कोरियाले स्वास्थ परिक्षण गर्नका लागि भने शु्क्रराज,पाटन र कोरिय मैत्री हस्पीटल मात्र हुन्। १० तारीख हाम्स हस्पीटलको pcr रिपोर्ट लियर एयरपोर्ट पुगेको यात्रुलाई कोरियाले तोकेको हस्पीटलको pcr भयन भनेर छिर्न दिईएन त्यो ट्राभलले अझै पैसा माग्छ भोलीपल्टको टिकटको लागी १६८०० रुपैयाँ दिनुस टिकट सारिदिन्छु! यात्रु भन्छन ट्राभलको गल्तीले टिकट सारेको पैसा मैले तिर्नुपर्ने? त्यो दिन घर नफर्कीकन यात्रु कतै होटलमा सुत्छन। भोलीपल्ट को टिकट वनायर ११ तारीख जुन कोरियाको लागी तोकीयको सरकारी शुक्रराज टेकु हस्पीटलको pcr रिपोर्ट लीयर जान्छन तै पनी वोर्डींग पास पनी ओरिजीनल दिदैन। केहीन केही त गडवड छ यात्रुलाई पक्कै पनी फसायको भान हुन्छ। टीकट काट्दै भनेको थीयो दुवई सम्म चैं पुग्नु हुन्छ। त्यवाट अर्को बोर्डींग पास दिन्छ। मेरो विचारमा बोर्डींग पास दिने कर्मचारीसंग ट्राभलले सेटींग गरिसकेछ। नक्कली बोर्डींग पास दिलायर आवुधावी एरपोर्टमा झारिदीयो त्यहांबाट मरिगय कोरिया जानको लागी प्लेन चढ्न दियन्।
दुई रात दुबईको आबुधावी विमानस्थलमा बस्नुपर्यो, न ट्राभलले केही सहयोग गर्‍यो न रिटर्न टिकट काट्यो। अझै पैसा खान खोज्दैथ्यो की भाई रिटर्न टीकट काटीदिउ ४८००० रुपैयाँ पर्छ। कती फटाह ट्राभल संचालक मान्छे जवकी यात्रुले ३००००रुपैयाँ मा आफैले टिकट काटे र त्यै एअर अरेवीया जुन चढेर आको त्यसैमा नेपाल फर्कीए। अव त्यो फटाह ट्राभलाई के कारवाही हुन्छ? जम्मा टिकटमा पैसा २ चोटी टीकट सारेको एक यात्रुको मर्जीले र अर्को ट्राभलको गल्तीले।
अनी रिटर्न टिकट गरेर दुवई बाट फर्केर आंउदा सम्म १ लाख ३८ हजार ६०० रुपयां गोल्डेन टच टुर्स एण्ड ट्राभलाई बुझाको छ पुरै रकम फिर्ता र हदै सम्मको कार्वाही गर्नपर्छ भन्नुहुन्छ पीडीत यात्रु। हाल अर्कै ट्राभलबाट टिकेट काटेर दक्षीण कोरिया पुग्नभछ। के कार्वाही गर्दा ठिक होला पुलीस प्रसासन या अन्य कुनै?